लाइफ ड्यामेज बाबाको लाइफ म्यानेज भएन ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/लाइफ ड्यामेज बाबाको लाइफ म्यानेज भएन !
केहि समय अघि ‘लाइफ ड्यामेज’ भन्दै युट्युवमा भाइरल भएका बाबाले विवाह गरेका थिए । अहिले भने उनको विवाहमा केही गडवड भएको संकेत दिएका छन् । उनले केही समय अघि विवाह गरेको भन्दै एक महिलालाई सार्वजनिक गरेका थिए । अमेरिकामा बस्दै आएकी महिलाले उनलाई श्रीमान भन्दै स्वीकार गरेकी थिइन्।
विवाह पछि आफ्नो डयामेज भएको लाईफ म्यानेज भएको पनि बाबाले बताएका थिए । तर अहिले उनले श्रीमतीको बारेमा प्रश्न गर्दा गोममटोल जवाफ दिएका छन्।उनलाई पटक पटक श्रीमतीसंगको कुरा सोध्दा पनि उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, आउने जाने भइरहन्छ । उहाँलाई अमेरिकाको चिल्ला गाडी मन पर्छ होला उनले भने।
उनले आफ्नो जिवनमा को आयो को गयो भन्ने कुनै मतलब नभएको पनि बताए । उनको यस्तो भनाईवाट वैवाहिक जिवन राम्रो चलेको छैन भन्ने बुझिन्छ । उनले कुराकानीमा देशको वर्तमान परिस्थितिकै विषयमा बढी बोली रहे।देशको राजनीतिक परिस्थितिको उदाहरण दिंदै अघोरी बाबाले आफ्ना धेरै कुरा उनका फ्यान र नेपाली जनतालाई बताई दिएका छन् ।